Onye bụ Sutherland MacDonald, onye omenkà a na-akpọ Victorian tattoo? | Igbu egbugbu
Ndị na-ese egbugbu
Egbu egbugbu na ogwe aka
Egbu egbugbu na azụ
Egbu egbugbu na ụkwụ
Tatoos nwere ụdị
Egbu egbugbu na akwụkwọ ozi
Tatoos nke Ifuru na Osisi
Ihe na egbugbu
Onye bụ Sutherland MacDonald, onye omenkà a na-akpọ Victorian?
Na Cerezo | | Ndị na-ese egbugbu
La akụkọ ihe mere eme nke egbugbu ọ bara ọgaranya ma na-atọ ụtọ. Otu ihe dị n'ọtụtụ ọdịnala, na ọdịda anyanwụ ka ndị ụka chụpụrụ ya na ndị ọzọ, ọ bụ ezie na oge agafewo, na n'ike, ekele ndị ọsụ ụzọ dịka Sutherland MacDonald.
Sutherland MacDonald guzobere na London n'oge akụkụ nke narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, ghọrọ onye ama ama maka ịbụ otu n'ime ndị mbụ nwere ụlọ ahịa egbugbu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara akụkọ ya, gaa n'ihu na-agụ!
1 Onye mbụ Victorian tattoo artist
2 Onye ọsụ ụzọ a ma ama
Onye mbụ Victorian tattoo artist
Amabeghị ihe banyere Sutherland MacDonald tupu o guzobe ụlọ ahịa ya na 76 Jermin Street na London. Ekwuru na onye a na-ese ihe a ga-ebu ụzọ kpọtụrụ egbugbu na 1880s, mgbe MacDonald na-eje ozi na ndị agha Bekee.
N'ọnọdụ ọ bụla, ụlọ ọrụ tattoo ya bụ nke mbụ edekọ na UK. Ọ bụ ya kwupụtara ụdị egbugbu akwụkwọ edo edo (N'ezie, ọ kwesịrị ka e kee ya karịsịa n'ihi na ọ nweghị onye ọzọ na-enye ọrụ ya n'obodo niile.) Yabụ, amara na ụlọ ọrụ ihe omimi ya meghere ọnụ ụzọ ya na 1889.
Onye ọsụ ụzọ a ma ama
N'oge na-adịghị anya Sutherland MacDonald ghọrọ onye a ma ama. A na-ekwu na ọ gbara ọtụtụ ndị eze na ndị a ma ama akara, dị ka eze Denmark na eze Norway ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ụmụ eze nwanyị Victoria (n'oge ahụ, na mmalite nke narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ejiji maka ndị eze na-egbu egbugbu ...).
Ọzọkwa, onye na-ese egbugbu a rụsiri ọrụ ike na nkà ya iji meziwanye onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ọ na-eji aka egbugbu na mbụ, na 1894 ọ tụgharịrị gaa na otu n'ime igwe egbugbu mbụ, nke ikike ya n'onwe ya. Na mgbakwunye, Ọ bụ otu n'ime ndị na-ese egbugbu mbụ na-ewebata agba ọhụrụ na atụmatụ ya, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ..
Sutherland MacDonald rụrụ ọrụ ihe karịrị afọ iri anọ dị ka onye na-ese egbugbu, na-ebipụta nka ya na ụdị anụ ahụ niile. Gwa anyị, ị maara akụkọ banyere onye na-egbu egbugbu a? Cheta ịhapụ anyị okwu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Onye bụ Sutherland MacDonald, onye omenkà a na-akpọ Victorian?
Ogbugbu Philippine, Igorots na ese
Ezi Obi Tattoos
Nata echiche egbugbu kachasị ọhụrụ na email gị.